Sidee in ay lumiyaan miisaan Fast: 3 Talaabooyinka Simple, Iyada oo ku saleysan Science – Health Deo
Sidee in ay lumiyaan miisaan Fast: 3 Talaabooyinka Simple, Iyada oo ku saleysan Science
Waxaa jira siyaabo badan in ay lumiyaan miisaan badan oo degdeg ah.
Si kastaba ha ahaatee, wax badan oo ka dhigi doonaa inaad gaajaysan oo qanacsanayn.
Haddii aadan haysan geyaan birta aad, ka dibna gaajo idinka dhigi doonaa in la siiyo ilaa on qorshayaashaas si deg deg ah.
Qorshuhu wuxuu halkan ku xusan ayaa:
Samee aad miisaanka si dhakhso ah lumiyaan, oo aan gaajo.
Iska yaree aad cuntada si weyn.
Hagaaji caafimaadka dheefshiidka waqti isku mid ah.
Halkan waxaa ku qoran qorshaha 3-tallaabo ah oo sahlan in ay lumiyaan miisaan degdeg ah.
1. Iska yaree Back on Sonkorta iyo Staarjku
The qayb ka ugu muhiimsan waa in ay dib u gooyaa on sonkorta iyo istaarj (carbs).
Marka aad samayn in, heerar gaajo aad hoos tagaan oo aad aakhirka cunaya calories badan ka yar.
Haddaba halkii gubanaya carbs tamar, jidhkaaga bilaabo quudinta off xaydha ku kaydsan.
Faa’iido kale oo ka mid ah jarida carbs waa in ay hoos u dhigtaa heerarka insulin, keenaya kelyaha si aad u daadiyaan sodium iyo biyo xad-dhaaf ka mid ah jidhkaaga. Tani waxa ay yaraynaysaa miisaanka biyo bloat oo aan loo baahnayn (2, 3).
Ma aha wax aan caadi ahayn in ay lumiyaan ilaa 10 rodol (oo mararka qaarkood ka badan) in toddobaadkii koowaad ee cunaya sidan, miisaanka baruurta jidhka iyo biyo labadaba.
Tani waa garaaf baadhitaan barbar low-carb iyo cuntada subagga ku yar in haweenka cayilan ama buuran.
Kooxda low-carb wax cunayo ilaa tirada buuxda, halka group subagga ku yar yahay calorie-xaddidan iyo gaajo.
Iska yaree carbs iyo aad bilaabi doonaan in ay cunaan calories ka yar si toos ah oo aan gaajo.
Ku rid si fudud, jarida carbs dhigeysa khasaaro baruurta on autopilot.
Soo saarida sonkorta iyo istaarj (carbs) ka cuntadaada yareeyo doonaa rabitaanka cuntada, hoos u heerarka insulin oo aad ka dhigi inaad lumiso miisaan oo aan gaajo.
2. Cun Protein, Fat iyo Khudaarta
mid kasta oo ka mid ah cuntada waa in ka mid ah ilaha protein ah, il baruurta iyo khudaar yar carb.
Dhismaha cuntada aad sidan si toos ah u keeni doonaa qaadashada carb galay kala duwan oo lagu taliyey of 20-50 grams maalin kasta.
Fish oo Seafood: Salmon, kalluun, haley, iwm
Hilibka, hilibka, digaaga, doofaarka, iyo wan yar, iwm
Ukun, ukunta oo dhan la yellow waa kuwa ugu fiican.
muhiimadda ay leedahay cunidda badan oo protein aan la ukas karo.
Tani ayaa la sheegay inay kor u-shiid by 80 100 kaloori maalintii.
Cuntooyinka-protein High kaloo yarayn karaan rabitaanka iyo fikradaha waswaaska ku saabsan cuntada by 60%, yareeyo rabitaanka qarsato habeenkii by badh, oo waxaad ka samaysaa si aad u buuxa in aad si toos ah u cunaan 441 calories ka yar maalin kasta – oo kaliya ay ku daray protein aad cunto .
Marka ay timaado in laga badiyay miisaan, protein waa boqorkii dalka nafaqooyinka. Period.
Ha ka baqin inaad ku shuban aad saxan kuwan khudaarta low-carb. Waxaad ku cuni kartaa xaddi ballaaran oo iyaga ka mid ah oo aan ka badan 20-50 carbs net maalin kasta. cunto A ku salaysan inta hilibka iyo khudaarta ku jira oo dhan fiber, fitamiin iyo macdan aad u baahan tahay si ay u noqdaan kuwo caafimaad qaba.
Cun 2-3 cunto maalintii. Haddii aad gaajaysan galabtii, ku dar cuntada ka 4-tii.
Ha baqin ee cunaya baruurta, sida isku dayaya in ay sameeyaan labada low-carb IYO subagga ku yar waqti isku mid ah waa wadadii failure. Waxaa ka dhigi doonaa inaad dareentid ugu gataan, oo ay deyso qorshaha.
Si aad u aragto sida aad u soo shirin karaan cunto aad, hubi qorshahaaga cuntada low-carb iyo liiska this of 101 cuntada low-carb caafimaad.
Urursada cunto kasta oo ka mid il protein ah, il baruurta iyo khudaar yar carb. Tani waxay idinka saari doonaan kala duwan 20-50 garaam carb iyo si weyn hoos u heer gaajo aad.
3. Miisaanka kor 3 Times Per Week
Uma baahnid in aad in ay gutaan in ay lumiyaan miisaan ku saabsan qorshahan, laakiin waxaa lagu talinayaa.
ikhtiyaarka ugu fiican waa in si gym tagaan 3-4 jeer toddobaadkii. Ma a-up diiran oo kor u miisaanno qaar ka mid ah.
Haddii aad ku cusub tahay jimicsiga, weydii tababare wixii talo ah qaar ka mid ah.
By kor u miisaanno, aad ku gubi doonaa badan oo calories oo looga hortago in aad metabolism ka hoos, taas oo waa wax caadi ah saamayn dhinac oo miisaanka ah.
Studies on cuntada low-carb muujiyaan in aad xitaa ka heli kartaa waxoogaa muruqa halka laga badiyay xaddi weyn oo baruurta jidhka.
Haddii u qaadaya miisaanka khiyaar ah ma aha, waayo, aad, ka dibna sameynayo qaar ka mid ah rabtay wadnaha sida socodka, orodka, ordaya, baaskiil ama dabaasha filan.
Waxaa aad u fiican in la sameeyo sort qaar ka mid ah tababarka iska caabin ah sida miisaanka qaadista. Haddii in khiyaar ah ma aha, rabtay wadnaha sidoo kale waa wax ku ool ah.
Optional – Ma ah “Carb Refeed” Marka Per Week
maalin maalmaha ka mid Waxaad qaadan kartaa off todobaadkii halkaas oo aad ka cuni carbs dheeraad ah. Dad badan ayaa door bidaan Saturday.
Waxaa muhiim ah inuu ku soo shirtagi in ilo carb caafimaad sida miro, bariis, quinoa, baradho, baradho macaan, miro, iwm
Laakiin keliya hal maalin carb sare – haddii aad bilowdo waxaa inta badan hal mar toddobaadkii aadan socday si ay u arkaan guul badan qorshe waxan u samaynaysaan.
Haddii waa inaad haysataa cuntada shilika Somaliland ah oo wax ka cuno caafimaad qabin, ka dibna waxa ay samayn on maanta.
La soco in cuntada Qiyaanoole ama refeeds carb UMA loo baahdo, laakiin waxa ay kordhin kartaa qaar ka mid ah hormoonada xaydha-gubanaya sida leptin iyo thyroid hormoonnada.
Waxaad heli doontaa miisaanka qaar ka mid ah inta lagu jiro maalinta refeed aad, laakiin inta badan waxaa ka mid ah noqon doona miisaanka biyaha iyo mar aad, waa lumin doonaa in 1-2 maalmood ee soo socda.
Lahaanshaha todobaad kasta meesha aad ka cuni carbs ka badan hal maalin uu yahay mid la aqbali karo, in kasta oo aan loo baahdo.
Maxaa About calories iyo Control qaybta?
Muhiim ma ahan inay tiriyaan calories inta aad sii carbs ah mid aad u yar oo ku eekaan protein, baruurta iyo khudaar yar carb.
Si kastaba ha ahaatee, haddii aad dhab ahaan doonayaan in ay iyaga u haystaa, isticmaali calculator this.
Ku qor faahfaahinta, ka dibna soo qaado tirada ka mid ah “ay lumiyaan miisaan” ama “ay lumiyaan miisaan Fast” qaybta – ku xiran tahay sida ay u soomi aad rabto in ay lumiyaan miisaan.
Waxaa jira qalab badan oo aad isticmaali karto si ay ula socdaan tirada calories aad cunaya. Halkan waxaa ku qoran liiska counters 5 calorie kuwaas oo lacag la’aan ah oo sahlan in ay isticmaalaan.
Ujeedada ugu weyn ee qorshahan waa in carbs hoos 20-50 grams maalin kasta iyo inta kale ee calories ka protein iyo xaydha hesho.
Ma aha lagama maarmaan in la tirin calories in ay lumiyaan miisaan ku saabsan qorshahan. Waxaa ugu muhiimsan in ay si adag u sii carbs aad ee kala duwan 20-50 garaam ah.
10 Talooyin Weight Loss loo sameeyo Waxyaabaha fudud (iyo si dhakhso ah)
Halkan waxaa ku qoran 10 ka badan oo ah talooyin ay lumiyaan miisaan badan xataa si dhakhso ah:
Seexo hurdo fiican habeenkii, habeen kasta. hurdo xumo waa mid ka mid ah sababaha halista ugu xoogga badan, waayo, miisaanka oo kordha, sidaa darteed daryeelka hurdo aad muhiim ah.
si tartiib ah Cun cunto. cuna Fast helaan miisaan dheeraad ah muddo. Cunista si tartiib ah ka dhigaysa in aad dareento buuxda oo oo kordhiyey miisaan-dhimista hormoonnada.
Cab kafeega ama shaaha. Haddii aad tahay kafee ama shaah cabbin, ka dibna cabbin sida ugu badan ee aad rabto in aad sida caffeine iyaga in kor loogu qaado kartaa dheef by 3-11%.
Dooro cuntooyinka khasaare-friendly miisaanka (eeg liiska). Cuntooyinka qaarkood ay yihiin kuwo aad waxtar u leh iscaateyaan. Halkan waxaa ku qoran liis ay ku qoran 20 cuntooyinka khasaare-friendly ugu miisaanka dhulka.
Iska ilaali cabitaanada sonkorta leh iyo casiirka furutada. Kuwanu waa waxyaalaha ugu naaxinta waxaad ka dhigi kartaa jirkaaga galo, iyo iyaga oo ka fogaanaya kaa caawin kara in miisaan kaa lumo.
Cun quraac-protein sare. Cunista quraacda-protein sare ah ayaa la sheegay in la yareeyo jamasho iyo qaadashada calorie maalintii oo dhan.
Cab biyo saacad ah kala bar cuntada ka hor. Mid ka mid ah daraasad muujisay in biyaha la cabbo saac ah kala badh ka hor cuntada oo kordhay miisaan lumis by 44% in ka badan 3 bilood.
Cun fiber milma. Cilmigu wuxuu caddeeyay in fiiloyin milma waxaa laga yaabaa in la yareeyo baruurta, gaar ahaan degaanka caloosha. supplements Fiber sida glucomannan sidoo kale kaa caawin kara.
Cun cuntooyin u badan oo dhan, ee aan la isticmaalin. Base inta badan aad cunto cuntada oo dhan. Waxay yihiin caafimaad, more buuxintii oo wax badan ka yar tahay inay keenaan cunid.
is miisaan maalin kasta. Cilmigu wuxuu caddeeyay in dadka maalin walba isu miisaantid badan waxay u badan tahay in ay lumiyaan miisaan oo xajiya off muddo dheer .
Xitaa talooyin dheeraad ah halkan: 30 Easy Siyaabaha in ay lumiyaan miisaan Dabcan (ay taageerayaan Science).
Waxaa ugu muhiimsan inuu ku soo shirtagi in saddexda sharciyada, laakiin waxaa jira waxyaabo kale oo dhowr ah oo aad samayn kartaa si loo dedejiyo wax.
Sidee Fast aad waayi doonto (oo Faa’iidooyinka Kale)
Waxaad filan kartaa in ay lumiyaan 5-10 pounds ah oo miisaankiisu yahay (oo mararka qaarkood ka badan) in toddobaadka ugu horreeya, markaas miisaanka joogta ah ka dib soo gaartay.
Anigu shakhsi ahaan waayi kartaa 3-4 kiilo toddobaadkiiba isbuucyo yar markii aan arrintan loo sameeyo si adag.
Haddii aad ku cusub tahay labisnaayeen, markaas wax badan tahay in si deg deg ah ku dhici doona. Miisaanka uu leeyahay wax dheeraad ah aad qabto in ay lumiyaan, si degdeg ah aad, waa lumin doonaa.
Waayo, maalmaha ugu horreeya, aad dareento in laga yaabo in waxoogaa la yaab leh. Jirkaaga ayaa gubanaya carbs muddo sanado ah oo dhan, sidaa darteed waxay qaadan kartaa waqti maxaa yeelay, waxay si aad loo isticmaalaa in gubasho baruurta halkii.
Tan waxaa loo yaqaan “flu low-carb” ama “flu Keto” oo sida caadiga ah ka badan dhowr maalmood gudahood waa. Aniga ahaan waxa ay qaadataa saddex. Isagoo intaa ku daray qaar ka mid ah cusbo dheeraad ah si aad cunto caawin kara arrintan.
maalmaha ugu horreeya ka dib, inta badan dadka warbixinta dareen aad u wanaagsan, oo leh tamar ka sii badan ka hor.
In kasta oo labaatan sano badan oo kacsanaan anti-baruur, cunto low-carb sidoo kale hagaajinaysaa caafimaadkaaga siyaabo badan oo kale:
Cadaadiska dhiigga oo si weyn u soo hagaagaysa.
Small, LDL cufan (Xumaanta) ee kolestaroolka hoos u dhaco.
sonkorta dhiigga ku socotaa in jidka hoos on cuntada low-carb tagaan.
Triglycerides u muuqdaan in ay hoos tagaan.
HDL (wanaagga) kolestaroolka kor u kaco.
Si aad u soo wada off, cuntada low-carb u muuqdaan in ay sidii ay fududahay in la raaco cuntada sida subagga ku yar.
Waxaad filan kartaa in ay lumiyaan miisaan badan oo, laakiin waxa ay dependson qofka sida ugu dhakhsaha badan ayay ka dhici doontaa. cuntada Low-carb sidoo kale aad u hagaajisid caafimaadkaaga siyaabo badan oo kale.
Waxaad Ha u Baahan Tahay Inaad Naftaada soo goosanaysa in ay lumiyaan miisaan
Haddii aad leedahay xaalad caafimaad, la hadal dhakhtarkaaga ka hor inta isbedel sababtoo ah qorshahani waxa uu yarayn karaa baahida aad daawo.
By yareynta carbs iyo hoos heerarka insulin, waxaad bedeli deegaanka hormoon oo aad jidhka iyo maskaxda “rabto” ay lumiyaan miisaan badan.
Tani waxay keenaysaa in si wayn xumo iyo gaajo la dhimay, baabi’inta sababta ugu weyn in dadka intooda badan la hababka miisaan lumis caadiga ah ku guuldareystaan.
Tan waxaa la xaqiijiyay in laga sameeyo ilaa aad lumiso in ay 2-3 jeer miisaan badan sida a subagga ku yar caadiga ah, cunto calorie-xaddidan.
Faa’iido kale oo weyn oo ay folks Dedejisanaysaan waa in dhibic hore ee miisaanka biyo keeni kartaa in farqi aad u weyn oo ku saabsan baaxadda leh ee sida ugu horreysa ee subaxdii soo socda.
Halkan waxaa ku qoran dhowr tusaale oo cunto low-carb kuwa fudud, delicious iyo la diyaarin karaa in ka yar 10 daqiiqo: 7 Cuntada Healthy Low-Carb in 10 Minutes ama ka yar.
On qorshahan, waxa aad cuni kartaa cunto wanaagsan ilaa aad tahay buuxa oo weli lumin ton oo ah baruurta. Ku soo dhawow janno.
વજન ફાસ્ટ હાઉ ટુ લુઝ: 3 સરળ પગલાંઓ, વિજ્ઞાન પર આધારિત